एक पटक युद्धभूमिमा देखा, ट्यांक लामो समय infantryman लागि डरलाग्दो सपना भएको छ। यी मिसिन को पहिलो वस्तुतः invulnerable थिए, र केवल विरोधी-ट्यांक ditches र अवरोध अर्को बौछार सिर्जना खनेर तिनीहरूलाई संघर्ष।
त्यसपछि आए विरोधी-ट्यांक बन्दुक, आजको स्तरअनुसार हास्यास्पद छ, जो शक्ति। जबकि पनि ट्यांक फेरि हतियार वृद्धि भएको, अब यी हतियार को सबै भन्दा डर हुन सक्छ। यहाँ दृश्य मा विरोधी-ट्यांक बन्दुक थिए। तिनीहरूले त्रुटिपूर्ण र दुष्कर थिए, तर टैंकरों तुरुन्तै तिनीहरूलाई आदर गर्न थाले।
म आज विरोधी-ट्यांक बन्दुक चाहिन्छ?
धेरै साधारण मान्छे आधुनिक युद्धभूमिमा यो "पुरानो" हतियार भन्न कुनै ठाउँ छ कि विश्वास: कवच वर्तमान ट्यांक सधैं पनि सञ्चितिको बारूद खण्डन छैनन्, बन्दुक को केहि प्रकार के आशा गर्न सक्छौं हामी! तर यो दृश्य सम्पूर्ण सत्य हो। त्यहाँ समस्या पनि धेरै "उन्नत" मिसिन को धेरै छुटकारा गर्न सक्षम छन् जो नमूनाहरू, केही छन्। उदाहरणका लागि, विरोधी-ट्यांक बन्दूक "हलकी तरवार" थप सोभियत उत्पादन।
छ त रोचक हतियार यसलाई अलग कुरा गर्नुपर्छ भन्ने छ। हामी अब के बारी।
पछिल्लो शताब्दीको 50s को बीचमा वरिपरि यो स्पष्ट भयो कि लडाई शक्ति वृद्धि को जरुरी आवश्यकता मा मुख्य antitank हतियार। कारण अमेरिकी को उपस्थिति भारी ट्यांक आफ्नै परियोजनाहरु थियो। त्यतिबेला म संविधानसभा हतियार बन्दूक डी-10T र बी-3 (- 100 मिमी दुवै) मा भएको थियो। प्रविधी ठीकै उनको प्रदर्शन अपर्याप्त हुन सक्छ कि मानिन्छ।
आकार वृद्धि गर्न सजिलो तरिका ... तर यो बाटो, विशाल भारी र ढिलो-सार्दा बन्दुक सिर्जना गर्न पुगे। र त्यसपछि, सोभियत ईन्जिनियरहरु smoothbore तोप, 1860 रूस मा देखि यहाँ प्रयोग जो गरिएको छैन फिर्ता जाने निर्णय! तिनीहरूलाई यस्तो निर्णय लिन के संकेत?
र कुरा जो गर्न बैरल मा dispersed हुनुपर्छ हतियार-भेदी खोल, उच्च गति छ। मात्र शुद्धता मा एक आमूल ड्रप गर्न उत्तरार्द्ध सुराकी को निर्माण मा कुनै पनि त्रुटि, तर पनि सबै हतियार को विनाश को जोखिम बढ्छ। को चिल्लो बैरल संग अवस्था एकदम विपरीत छ। यसको मुख्य फाइदा थकित भएको वर्दी छ।
कठिनाई को विकल्प
तर विकल्प rifling के पाउन छ? आखिर, आफ्नो खर्च projectile मा लामो दूरी भन्दा प्रभावकारी आगो सञ्चालन गर्न अनुमति दिने, दिशात्मक स्थिरता राख्छ! र निर्णय एक पटक फेरि gunners को अभिलेख मा फेला पार्न। यो तपाईं smoothbore बन्दुक लागि feathered projectiles प्रयोग गर्न सक्ने बाहिर गरियो। वर्तमान प्रविधि (त्यतिबेला) यो मात्र होइन feeler (बन्दूक को भित्री व्यास संग coinciding) बनाउन अनुमति, तर पनि disclosed। बस राख्नु, को खोल (आरपीजी 7) को पनि बैरल को बाहिर छोडेर पछि ब्लेड खुलेको छ।
पहिलो प्रयोग र पहिलो नमूना
पहिलो प्रयोग केहि लहरै होनहार शत्रु ट्यांक लागि कम्तिमा एक 105-मिमी बन्दूक आवश्यक देखाएका छन्। को रेलवे समय बुद्धि मा एक रिपोर्ट पाएको ब्रिटिश डिजाइन यस्तै कैलिबर hitherto अभूतपूर्व प्रदर्शन संग बन्दूक। । वी हां Afanaseva - - परियोजना को मुख्य डिजाइनर "भेट्टाउने र लाग्नेछन्" सबभन्दा छोटो सम्भव समयमा प्रतियोगिहरु गर्न वादा। को प्रतिभाशाली डिजाइनर मात्र होइन छुट्याइयो समय छुटेका छ, तर पनि घरेलू ट्यांक नयाँ हतियार स्थापना गर्न मौका प्रदान। यो अन्त गर्न, यो अलिकति 1000 मिमी बिल्कुल खोल छोटा बलिदान छ ballistics।
विरोधी-ट्यांक बन्दूक, बारम्बार यस लेखमा दिइएको छ जो एक फोटो - यसरी "पन्नी" जन्म भएको थियो।
कि यसको निर्माणमा प्रयोग भएको थियो?
काम शीघ्र, हामीले एक गाडी को डी-48 Cannons देखि, अलिकति आफ्नो संरचना परिमार्जन गरे। तर क्षेत्र परीक्षण तुरुन्तै उहाँले पनि नयाँ उपकरण लागि hlipok कि देखाए। म स्क्राच यो भाग पूर्ववत थियो। सम्मान र नयाँ परीक्षण बन्दूक सेवा हालिदिए थियो। यो एक साधन गेज 105 मिमी "टी-12" को रूपमा चिनिन्छ। "हलकी तरवार" आधुनिक नमूना हदसम्म यो भिन्न हुन्छ।
नयाँ बन्दूक मा ट्रंक एक-टुक्रा ढाँचा बनेको थियो। लम्बाइ - 6510 मिमी। को डिजाइनर सक्रिय-प्रतिक्रियाशील प्रजाति थूथन ब्रेक प्रयोग छनौट गरे। को breech ठाडो वेज गेट संग सुसज्जित छ। गोलीबारी बाहिर सीधा पाङ्ग्रा देखि गरियो, अतिरिक्त fixation (निलम्बन अवरुद्ध गरेर) आवश्यक छैन।
तपाईं कल्पना गर्न मद्दत गर्न, एक बन्दूक "हलकी तरवार", हामी छोटकरीमा चित्रित हुनेछ विशेषताहरु जो सक्षम छ, तालिका मा एक नजर प्रस्ताव।
विशेषताहरु बन्दूक टी-12 2A19
कर्मचारी संख्या (गणना उपकरण)
हतियार को कुल लम्बाइ
projectile ठूलो (विशेषताहरु आधारमा), किलो
छैन आधुनिक बन्दूक "हलकी तरवार" - यो छ भनेर याद गर्नुहोस्। यसलाई आफ्नो धेरै गम्भीर नयाँ संस्करण विशेषताहरु।
बारूद को विशेषताहरु
पहिलो मामला - विरोधी-ट्यांक बन्दूक बारूद लागि। पनि phenomenally दीर्घकालीन र विश्वसनीय हतियार तपाईं यसलाई लागि पुरानो, घटिया गोले प्रयोग गर्दै भने, "चांद" मा उत्तेजित गर्दछ। र हाम्रो उच्च प्रदर्शन विशेषताहरु देखाउँदछ बन्दूक "हलकी तरवार", - सबै भन्दा राम्रो प्रमाण।
नयाँ हतियार लागि गोला, बारूद पनि फेरि नयाँ विकास गर्न थियो किनभने, समस्या धेरै ल्याए। मुख्य प्रकार - भेदी र सञ्चितिको। शट को एक मानक उच्च विस्फोटक प्रकार प्रयोग शत्रु कर्मियों नष्ट गर्न। गणना को अध्ययन सिक्दै प्रयोग गरिन्छ छेड्नु projectiles। जस्तो केही सिर्जना अनुभव बस अवस्थित छैन रूपमा समस्या को एक धेरै, उत्तरार्द्ध को पक्षति वितरण र साँच्चै smoothbore 100mm बन्दूक राम्ररी अझै घरेलू उद्योग द्वारा महारत गरिएको छैन।
मुश्किल, Unopened ब्लेड संग projectile एक backlash गठन बिना स्टेम च्यानल विरुद्ध दृढ पर्याप्त आराम थियो थियो। यहाँ र अवधारणाहरु को वेवास्ता दर्जनौं रूपमा अपनाए थिए, तर कुनै पनि सबै आवश्यकताहरु डिजाइनर पूरा। Oddly पर्याप्त, तर काम सुरुमा प्रस्ताव र अस्वीकार गरिएको थियो कि निर्णय थियो "किनभने आदिम को।" अक्सर सबैभन्दा विश्वसनीय छ - यो एक पटक फेरि सबै भन्दा सरल पुष्टि।
यस मामला मा कोर स्टेनलेस maraging इस्पात बनाउन आग्रह गरिएको छ। सुझाव-विभक्त खोल - सबैभन्दा पारंपरिक stamped इस्पात पाना, को पुच्छर stabilizer केही भागहरु बनाउन प्रयोग बाट। विशेष डाली एल्यूमीनियम मिश्र धातु बाट "तीर" Feathering, र पछि एल्यूमीनियम anodizing थप आवश्यक बाहिर फेला परेन। Tracer को पुच्छर को भित्र मा थिचिएको र थ्रेड जडान र कोर गर्न थप निश्चित छ।
जो को तत्व obtyuriruyuschim तामा घन्टी लिङ्क गरिएको छ, अन्त भएको तीन विकल्प बसे मा: धेरै काम एक अग्रणी बेल्ट खोल भएको छ। रूपमा चाँडै projectile को बैरल च्यानल aerodynamic सेना बस पक्षति खोल्न ब्यान्ड tearing छ, र "तीर", छोड्छ रूप मा, ट्यांक गर्न rushes। 750 मीटर को दूरी मा विचलन छैन दृष्टि को तेर्सो रेखा मा 2.5 भन्दा बढी डिग्री छ।
शट को अन्य प्रकार को सुविधाहरू
कुल मानक र उच्च-विस्फोटक शट यस्तै निर्माण छ। आफ्नो मामला मा पनि projectile शरीर rigidly को रियर स्लिभ, feathering संलग्न छ जो साथ दिए। फरक अभाव obtyuriruyuschego बेल्ट र व्यास ट्रंक लागि ती समान थियो। लागि सञ्चितिको गोले छ - प्रयोग पाँच ब्लेड feathering संग झाडी, र उच्च-विस्फोटक शट को मामला मा।
कुल र उच्च-विस्फोटक शट को बाहुला यति उच्च छैन मागहरू बनाउन, तर यो इस्पात को साधारण (मढ़वाया लाह) को बाहिर गरे किनभने। खडाऊँ projectiles समान प्रकारको उच्च गुणस्तरीय पीतल स्लिभ हतियार रूपमा लगाउने छैन बाहिर भनेर मा विशेष बाहिर लगे। विशेषज्ञहरु यसको सेवा जीवन वृद्धि गर्न कुनै पनि तरिका देख थिए धेरै महंगा, त्यसैले त्यो समयमा बन्दूक - "पन्नी"।
गोले को Finalization
तर तिनीहरू सबै गम्भीर संशोधन आवश्यक रूपमा शट समस्या विभिन्न प्रकारका को ग्रहण संग बस, थालेका छन्। विशेष मा, छेड्नु projectiles हतियार को पूर्ण ठाडो प्रबन्ध तहहरू penetrated, तर तिनीहरूले छड्के टाढा कम पत्यार पार्र्ने संग सामना। केही असम्भव कोण, या बस रिकोषेट अन्तर्गत हतियार मा projectile वा चिन्ह। जबकि विशेषज्ञहरु सबै स्वीकार्य समाधान फेला Landfills, decommissioned ट्यांक दर्जनौँ भङ्ग गरिएको छ।
डिजाइन मा नयाँ तत्व
यो केवल "बूम" अतिरिक्त अत्यधिक टिकाउ मिश्र धातु को कोर को निर्माण गर्न थप चालेको। यो भाग शुरू भएपछि (वजन मात्र 800g), बनेको tungsten कार्बाइड, को गोलीबारी तुरुन्तै शानदार परिणाम देखाए: 60% द्वारा सुधार एक sloping हतियार द्वारा penetrated गर्न!
चाँडै यी विशेषताहरु सबै व्यवहार मा परीक्षण गरिएको छ। तोप "हलकी तरवार" लडाई जो प्रयोगले गोलान हाइट्स मा घटना को समयमा, प्रवेश उत्कृष्ट परिणाम देखाएको छ थाले।
परियोजना थप विकास
चाँडै, एक नयाँ बन्दूक र सोभियत टैंकरों गर्न आकर्षित ध्यान। तिनीहरूले शक्ति र कम recoil smoothbore बन्दूक र यसको प्रकाश वजन प्रभावित थिए। पहिलो नमूनाहरू तुरुन्तै सैन्य अमेट छाप गरे जो जल्दी, मा संकलित थिए।
ट्यांक को चेसिस मा स्थापित भइरहेको टी-54, नयाँ 100 मिमी तोप "हलकी तरवार" सिक्ने लक्ष्य (कटौती आवास एउटै टी-54) सही माध्यम र साथ exorbitant दूरी punched। को चालक दल को भूमिका खेलेका जो भेडा, को, लगभग केही बाँकी।
1960 परिमार्जन वांछित राज्य बन्दूक "हलकी तरवार" मा अनुभव चेसिस (टि-55 को आधारमा) मा माउन्ट गर्न थाले। त्यसको केही समयपछि सबै परीक्षण नयाँ smoothbore बन्दूक यसको निरपेक्ष श्रेष्ठता देखाइएको, D54 पूरा भएको छ। यो श्रृंखला मा ट्यांक गोले एक थूथन ब्रेक छैन कि "पैदल" परिमार्जनहरू विपरीत। बस छ महिना ट्यांक बन्दूक "हलकी तरवार" (फोटो यस सामाग्री मा देख्न सकिन्छ जो) प्रतीकको 2A20 अन्तर्गत सेवा हालिदिए थियो "कटार।"
उहाँले 100 मिमी को कैलिबर मा विशेष आवश्यक थिएन भन्ने तथ्यलाई। कि सोभियत ट्यांक कहिल्यै exorbitant आकार र वजन भएको र तथ्यलाई दिइएको ब्रेक थूथन को दक्षता बढाउँछ निकै, घरेलू ट्यांक निर्माण मा आफ्नो स्थापना मात्रै अन्य सबै विधिहरू रद्द प्रयास गरिएको छ र इच्छित परिणाम दिनुभएन अवस्थामा अभ्यास थियो।
को 1970 मा बन्दूक "हलकी तरवार" फेरि परिमार्जन गरिएको छ। वैज्ञानिकहरू र ईन्जिनियरहरु को काम को परिणाम टि-12A (2A29) को एक साधन भएको छ। Metallurgists र दबाइ स्वतः नयाँ, उन्नत बारूद को परीक्षणको लागि जग दिनुभएको थप मजबूत चड्डी उत्पादन तरिका पाएका छन्।
फेरि भएपछि, ढुवानी शूटिंग गर्दा लगभग पूर्ण कम्पन हटाउनु भएको छ के परिणामस्वरूप, पूर्ण redesigned गरिएको छ, व्यावहारिक दर लगभग आधा द्वारा उठ्नुभयो। यसलाई विकास र दृश्यात्मक (उदाहरणका लागि, धूलो आँधीबेहरी) गरिब हुँदा रात सुटिङ, साथै जटिल राडार, रात र दिन दुवै लागि डिजाइन लागि दृष्टि द्वारा अपनाए थियो। को थूथन ब्रेक बन्दूक एक नुन SHAKER जस्तो देखिन्छ रूपमा बाह्य यो संशोधन भेद गर्न धेरै सजिलो छ।
साथ परिमार्जन 2A29 संग टंगस्टन मिश्र धातु को एक टुक्रा बाट गठन काम गरिरहेको भाग साथ पूर्णतया नयाँ subcaliber projectile अपनाए। munition ठूलो अलिकति वृद्धि, तर गोलीबारी दायरा लगभग 30% वृद्धि। लडाई चालक बन्दुक लागि मैनुअल को एक नयाँ संस्करण निम्न। यो बैरल को सम्भव बिच्छेद छ रूपमा सुटिङ, पुरानो "हलकी तरवार" 2A19 देखि munitions कडाई निषेधित छ सुधार बताए।
1971 देखि, को श्रृंखला मा अद्यावधिक भयो ट्यांक "हलकी तरवार" टि-12A अन्तर्गत - 2A20M1 "कटार।"
मिति, यो हतियार एकदम मिति बाहिर छ। यसलाई "हलकी तरवार" तोप अब हतियार को स्थिर प्रवेश ग्यारेन्टी गर्न सक्ने विश्वास गरिएको छ आधुनिक ट्यांक को, तर कुनै परिस्थितिमा यो एकदम आफ्नो जिम्मेवारी सामना छ।
तसर्थ, यूगोस्लाव द्वन्द्व समयमा धेरै राम्रो परिणाम सबै पक्षहरूबाट प्रयोग भएको थियो। विशेषज्ञहरु यस उपकरण शत्रु को प्रकाश Armored वाहन नियन्त्रणमा (घरेलू BMP भन्दा भारी छ दुई पटक) को लागि आदर्श छ भनेर याद गर्नुहोस्। साथै, बन्दूक "हलकी तरवार" (फोटो माथि), लगभग निश्चित नाटो ट्यांक को सबै भन्दा छेउमा र कडी मा प्रहार गर्न सक्नुहुन्छ। यो "पुरानो महिला" अझै पनि ओछ्यानमा जान पनि प्रारम्भिक हो भनेर सुझाव।
उद्धार हेलिकप्टर रूस EMERCOM। आगो र एम्बुलेन्स हेलिकप्टर मो
म के सेना चाहँदैनन्?
Aglet - लामो इतिहास भएको सहायक
PPA - नगर कानुनी प्रेरित छ ...। PPA को प्रकार
"यो मास्टर को डर छ": हितोपदेश र यसको अर्थ महत्त्व
वर्णन, संरचना, प्रतिक्रिया र निर्देशन "Pneumo 23"। टीका "Pneumo 23": प्रयोगको लागि निर्देशन र चिकित्सकहरु को प्रतिक्रिया, मूल्य
इटाली उच्च पुनर्जागरण
"Maynkraft" मा मूर्तिहरू: पुस्तिका सिर्जना गर्न
कुकुरले कुकुर शेडेको छ: के गर्न र कसरी व्यवहार गर्ने?
चामल porridge कसरी खाना पकाउनु: विधि र पकाउने को nuances
दबाइ "Avodart" छ: समीक्षा। जो "Avodart" को लागि उपचार भएको थियो: के परिणाम
Parametric मूल्य निर्धारण विधि